July Dream: An offhand meal
မိန်းကလေးတွေဟာ အစားအစာထက်အရင် တခြားဟာကို စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ဟိ
ပလာတာ ကတော့ ပြောရရင် ပလာတာတကြောပြတ်သွားတာပေါ့ ဟုတ်လား
ကြက်ဥလောက်တော့ အလျော့မပေးနဲ့ ကြိုးစားပါဦး
ယောက်ျားလေးတွေ အချက်အပြုတ်ကောင်းရင် မိန်းကလေးတွေ မမီဘူးလေ
ကိုယ့်ဆ၇ာ ရဲ့ ဖြစ်သလိုကလဲ ရှယ်တွေလျည်းပဲနော်
အစ်ကိုရဲ့ ဖြစ်သလိုစားခြင်းများကို မှတ်သားသွားပါတယ်. ဒီလိုပါပဲ ကျနော်တို့လည်း အိမ်ထမင်းမစားရတာ နှစ် ချို့နေပြီးအစ်ကို ရေ တစ်ခါတလေတော့ အမေ့ရဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းလေးကို သတိရမိတာ.. မြေပဲ ကြော်လေးနဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းလေး များ စားချင်လှဘိ အကိုရေ... ကျနော်ကတော့ အစ်ကိုထက် တော်ပ.. ဟဲ ဟဲ ကြက်ဥကြော်တတ်တယ်.. :P
မိန်းကလေးတွေ အစားအစာကို ပထမ ဦးစားပေး အဆင့်ထားကြောင်း ကြေညာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတော့ အနည်းဆုံး တစ်ယောက်က သက်သေခံပေးထားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါပြီပေါ့ဗျာ။
ဖြစ်သလိုတွေက ဖြစ်သလိုလေးပါပဲ။ ရှယ်တွေလို့ မမြင်မိပါဘူး။ ကြက်ဆီပြန် ၀က်အသားနီလန် ပုဇွန်တုပ်ဟင်း စတဲ့ ဟင်းမျိုးတွေမှ မဟုတ်တာဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အဲဒီဟင်းမျိုးတွေထက် အခြောက်အခြမ်းတွေကို ပိုကြိုက်တယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်ထက် တော်တာ တကယ် အမှန်ပါပဲဗျာ။ ကြက်ဥကြော်တတ်တယ် ဆိုတာ တော်တာပေါ့။ ကျွန်တော်က ဆီပေါက်မှာ ကြောက်တယ်ဗျာ။
=) .. ထမင်းချက်ပြီး အခြောက်အခြမ်းနဲ့ စားတတ်တာ တော်သေးတာပေါ့.. ပျော့၊ တူး၊ မနပ် ကျင့်စဉ်တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့သေးလား.. :P
ညီမကတော့ cooked food တွေ ၀ယ်စားဖြစ်တာ များပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်တယ် =)
ထမင်းက ပေါင်းအိုးနဲ့ ချက်တာလေ။ ဆန် အထက်မှာ ရေကို လက်တစ်လုံးစာလောက် ပိုထည့်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဖော်မြူလာအတိုင်း လက်ညှိုးတစ်ချောင်း အသုံးပြုပြီး ချက်တဲ့အတွက် ပျော့၊ တူး၊ မနပ် ကျင့်စဉ်တွေ မကျင့်ခဲ့ရပါဘူးကွဲ့။ ဒီလောက်တော့ လုပ်တတ်အုံးမှပဲ။ လူက ဘာမှကို သုံးစားမရတဲ့လူ ဖြစ်နေပြီလေ။ ဟဟ...
လင်းလဲ ရုံးပိတ်ရက် အစားအသောက်နောက်လိုက်နေတာနဲ့ပို့ အသစ်ကို ခုမှဖတ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှ အကြွေးဆပ်ပေမဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟီးဟီး ဆီပေါက်လို့ မျောက်ခုန်သလိုခုန်နေတာကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တယ်။း)
ချက်ပြီးပီ ဗျို့ :D :P
ဟုတ်တယ်ဗျို့။ စလုံးမှာ အစားအသောက် အရမ်းမကောင်းလှဘူးနော်။ ဈေးလဲကြီးသဗျို့။ အမြဲတမ်း စားသုတ်သုတ်၊ သွားသုတ်သုတ်ဖြစ်နေလို့လားမသိ၊ နေသားကျသွားရင်တော့ စားလို့ကောင်းသွားမယ်ထင် တယ်။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ကိုဒရမ်းကြီးရေ။ ဟိဟိ အခုမှ မြင်တယ် ။
အဟဲ လို့ပဲ ပြောပြီး စပ်ဖြဲဖြဲလေးပဲ နေပြတော့မယ်နော်။ နောက်ဆို မြင်အောင် ကြည့်ပေါ့။
ချက်ပြီးရင် နည်းနည်းလောက် ကျွေးအုံးလေဗျာ။ ဘာချက်မှန်းလည်း မပြောသွားဘူး။ ဖြစ်သလို ချက်တာပဲလား ဟင်။
(အမလေး ခေါ်ရတာ လျှာယားလိုက်တာနော်။ တွန့်တောင် တွန့်သွားတယ်။)စလုံးမှာ နေသားတကျ ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်သလိုပဲ စားဖြစ်နေအုံးမှာပါ။ အစားအစာက ဒီပုံစံတွေပဲလေ။ မြန်မာပြည်က အစားအစာတွေပဲ ကြိုက်မိတော့ တကူးတက ၀ယ်စားဖြစ်နေမှာပါ။ အဲဒီလိုပဲ အချိန်ပေး မချက်ပဲ ဖြစ်သလိုပဲ စားနေအုံးမှာပါ ခင်ဗျ။
အစာစားနေတဲ့အချိန် ကျန်တာတွေ သွားပြောရင် စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုပဲဗျ။ဟုတ်မဟုတ်တော. မသိ. ဆာရင် တော. သိတ် စိတ်တိုတာဘဲ. စားပြီး မှ ရွှင်တယ်။
နဲနဲ တော.ချက် ကြည်.ပါဦးလေ. စားတတ်ရင် ချက်တတ် ရမတဲ. လူကြီးတွေ ကပြောတယ်။
ဒါဆို စားလည်း စားတတ်ဘူး။ ချက်လည်း မချက်တတ်ဘူး။ အဟီး...
ဖြစ်သလိုပဲ စားတတ်တာဆိုတော့ မချက်တတ်တာ အပြစ်မရှိပါဘူးနော်။
ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား အစ်မ... (လူကြီးတွေက ပြောတယ်ဆိုလို့ လူကြီးကို လှမ်းမေးထားတာပါဗျာ။)
မမိုက်ပါဘူး မီးငယ်ရယ်။ ကျုပ်က ပေတေတာပါဗျ။ အဟ...
ဖြစ်သလို စားခြင်း သင်ခန်းစာကို လေ့လာမှတ်သား သွားပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်လည်း အတူတူပဲဗျ။ အသင့်စားလို့ ရတဲ့ အထုပ်တွေသုံးပြီး ဟင်းချိုတစ်ခွက်တော့ ရအောင်ချက်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုတော့ ဟော့ပေါ့ပဲ။ သူများတွေကတော့ အသီးအရွက် ရေနွေးထဲ ထည့်ပြုတ်တာမှ ပိုကောင်းဦးမယ်ဆိုပဲ။ ဟဲဟဲ ဒီလောက်ဆို ရပြီဟုတ်။
ကိုဇင်ယော်က ကျွန်တော့်ထက် တော်တာပေါ့ဗျာ။ အနည်းဆုံး Hot Pot ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်သေးတယ်။
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလား ကြက်ဥကိုခေါက်ပြီးမှကြော်လေ အဲဒါဆို ဆီပူစင်မှာမကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့ ဒီတိုင်းပဲကြိုင်တယ်ဆိုရင်လဲ ကြက်ဥကိုဖောက်ပြီးရင် အိုးထဲမထည့်နဲ့အုံး ခွက်ခလေးထဲအရင်ထည့် အိုးမှာရေမရှိရင်ဆီကအဲလောက်မပေါက်ပါဘူး မီးကိုမပူတပူ မအေးတအေးလေးနဲ့ကြော်ရင်အဆင်ပြေမှာပါ ယောက်ျားလေးပဲ ဒီလောက်တော့ သတ္တိရှိပေါ့ ဆီပူစင်ရင် ငံပြာရည်လောင်း အရာကျန်ခဲ့ရင် ကောင်မလေးမကြိုက်တော့မှာစိုးရင်တော့ မပြောတတ်တော့ပါရှင်
ကြက်ဥလဲစားချင် ဆီပူလည်းမစင်ချင်ရင်တော့ စိတ်ကိုဆွဲဆန့်ထားရမယ် အဆင်ပြေပါစေနော်...